android ဖုန်းအဘို့ကို SMS App ကိုများအတွက် Messenger ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အီးမေးလ် & SMS ကို Apps ကပ » SMS အတွက် Messenger ကို
SMS ကို APK ကိုများအတွက် Messenger ကို
မက်ဆေ့ခ်ျများ - ကိုအကောင်းဆုံးထုံးစံမက်ဆေ့ခ်ျများ & ခေါ်ဆိုခ app ကိုနှင့်အတူ themes များ, ဖောင့်, နောက်ခံပုံများ, ဖုန်းမြည်သံ, ခေါ်ဆိုမှု features နဲ့သင်လိုချင်သောအရာခပ်သိမ်းမရေမတွက်နိုင်သော။ သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်! ပုိ႔ပါ 3000 + အသစ်ကအီမိုဂျီ Lenny မျက်နှာများ, စတစ်ကာများ, GIF များ & SMS စာတိုမှတဆင့်မက်ဆေ့ခ်ျစာပို့။ ရယ်စရာကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ, SMS, MMS ကို, GIF များနှင့်ရုပ်ပြောင်မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်း။ တစ်ဦးကရယ်စရာကို SMS မက်ဆေ့ခ်ျစတော့ရှယ်ယာမက်ဆေ့ခ်ျ app ကိုအစားထိုး app!
မက်ဆေ့ခ်ျများ - နှင့်အတူလုံခြုံစွာစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ ပုဂ္ဂလိက box ကို SMS ကို blocker ပင် SMS ကို backup လုပ်ထား & restore နှင့်အချိန်ဇယားကို SMS! ကြီးမားသောအချိန်လေးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မည်မဟုတ်, နှင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ဖုန်းကိုသိုလှောင်မှုဖြုန်း spam များကိုမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မည်မဟုတ်, ပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျများဆုံးရှုံးစိုးရိမ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ စာသားမ messeages ပေးပို့ခြင်းနှင့်အတူဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖူး မရေမတွက်နိုင်သောရုပ်ပြောင်, GIF စတစ်ကာ, ဆောင်ပုဒ်, ပုဂ္ဂလိက box ကို SMS ကို blocker, SMS ကို backup လုပ်ထား &
SMS ကို restore နှင့်အချိန်စာရင်း! ရယ်စရာကို SMS မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်း & ပိတ်ဆို့ခြင်းခံစားပါ။
မက်ဆေ့ခ်ျ Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ
- SMS ကိုအရန်ကူး & restore
မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးဖို့✔ Backup ကို SMS စာတို & MMS ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများ, မက်ဆေ့ခ်ျပျောက်ဆုံး get ဘယ်တော့မှ
✔ Restore ကိုဖျက်ပြီးသို့မဟုတ် SMS & MMS ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုအခါတိုင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရ
- Caller ID ကို
✔အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်နံပါတ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် - ပင်သူတို့အားမပေးသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်စာရင်းထဲတွင်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထက်ပို 1 သန်း spam များကိုနံပါတ်များကိုအဘို့အ✔ Get သတိပေးချက်များ
အဆက်အသွယ်အသီးအသီးခေါ်ဆိုခပြီးနောက်✔တစ်ခုမှာကလစ်စာသားကို။ နောက်တဖန် input ကိုအရေအတွက်လိုအပ်ဘယ်သူမျှမက
တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုသူ ID မျက်နှာပြင်ကနေ✔ Access ကိုအခြားအကိုမက်ဆေ့ခ်ျ features တွေ
- ဇယားကို SMS
✔နှောင့်နှေး SMS ကို message ကိုမှားမက်ဆေ့ခ်ျကိုပြင်ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းပေး
✔အချိန်ဇယားကို SMS မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အတူမည်သည့်ကြီးမားသောအခိုက်လက်လွတ်ဘယ်တော့မှမ
- ပုဂ္ဂလိက BOX
✔မက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ် Encrypt & ပုဂ္ဂလိကသေတ္တာနှင့်အတူဆင်း lock
snooped ခံရခြင်းမှ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့✔ဝှက်ပုဂ္ဂလိကသေတ္တာအိုင်ကွန်
- SMS ကို BLOCKER က
✔ spam များကိုမက်ဆေ့ခ်ျများအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမပူပန် blocker နှင့်အတူသိုလှောင်မှုအာကာသလောင်
SMS ကို blocker မှဖြည့်စွက်နေတဆင့်✔ Block ကိုကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျ
- အခမဲ့ Funny SMS ကိုစုဆောင်းခြင်း
သငျသညျရှေးခယျြနိုငျ✔10 + အမျိုးအစားကို SMS မက်ဆေ့ခ်ျ
✔မတ်ေတာသညျကို SMS, ပရောပ SMS ကို, ရင်ခုန်စရာ SMS ကို, ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို SMS, နှုတ်ဆက်ခြင်းကို SMS နှင့်ပိုပြီး
- Funny ရုပ်ပြောင်သတင်းစကား
တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျကနေ✔မြန်စာသားကို 3000 + Lenny မျက်နှာ, အီမိုဂျီ & ရုပ်ပြောင်
စာသားမက်ဆေ့ခ်ျအတွက် Lenny မျက်နှာ, အီမိုဂျီ & ရုပ်ပြောင်များ✔ဂရိတ် display ကို
- မက်ဆေ့ခ်ျများ IN Funny ရုပ်ပြောင် STYLE
✔ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကို SMS အားလုံးကိုအသစ်ကရယ်စရာရုပ်ပြောင် & Lenny မျက်နှာကိုထောကျပံ့
SMS ကိုအတွက် Twitter နဲ့အီမိုဂျီ One မှ✔ပံ့ပိုးမှု update ကိုရုပ်ပြောင်
✔ပံ့ပိုးမှုကြံ့, အလယျပိုငျး Finger, Taco သက်တံ့ရောင်နှင့်ပိုပြီးရယ်စရာရုပ်ပြောင်
- အခမဲ့ Animation GIF ကို & ရုပ်ပြောင်အေအာရ်တီဆေး
MMS မှတစ်ဆင့်ပူ GIF များ MMS ကိုယိ၏✔ဝေမျှမယ်ထောင်ပေါင်းများစွာ
✔ကို SMS မှတဆင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်ထူးခြားသောအီမိုဂျီအနုပညာ & Lenny မျက်နှာ Share
- SMS ကို theme ကိုစိတ်ကြိုက်
အံ့သြဖွယ်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ themes များ၏✔တန်ချိန်
သင်ဆန္ဒရှိအဖြစ်✔ SMS ကိုနောက်ခံ Customize
- Awesome MESSAGES များဖောက်သည်များ
✔စာရိုက်ပူဖောင်း, SMS ကိုပူဖောင်း, အရောင်, စာလုံး & ဝေါလ်ပေပါကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်
- မောင်းစနစ် & AUTO REPLY
✔ဖုန်းခေါ် မှလွဲ. မက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာမက်ဆေ့ခ်ျအနေဖြင့်ယာဉ်မောင်း Mode ကိုကို disable မက်ဆေ့ခ်ျကိုအကြောင်းကြားစာများ
ယာဉ်မောင်း Mode ကိုဖွင့်သည့်အခါ✔အော်တိုပြန်မယ်, နိမ့်ဆုံးမှအာရုံပြံ့လှငျ့စောငျ့ရှောကျ
- ANDROID WEAR လိုက်ဖက်တဲ့
✔ကို SMS မက်ဆေ့ခ်ျများ Android Wear အပေါ်ဿုံအလုပ်ဖြစ်တယ်
✔သင့်ရဲ့ Android Wear အပေါ်ကို SMS မက်ဆေ့ခ်ျများဝတ်ဆင် Get
✔တစ်ချိန်ကအချိန်များအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုမိတ်ဆွေများရုပ်ပုံ, အသံ, ဗီဒီယို MMS ကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/MessagesSMS
ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်သင်၏ SMS & လိုအပ်ချက်များကိုစာပို့ MMS ကိုများအတွက် "မက်ဆေ့ခ်ျများ" ကိုပိုမိုစုံလင်သောအောင်အပေါ်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ ပဲမဆိုမေးမြန်းချက် / အကြံပြုချက်များ / ပြဿနာများသို့မဟုတ်မင်္ဂလာပါလို့ပြောသည်ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့အခမဲ့ခံစားရပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့ချစ်ကြလိမ့်မည်။ သငျသညျအခမဲ့ရယ်စရာကို SMS & MMS ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများခံစားနေကြလျှင်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုပြောပြပါ။
အချို့သော bug တွေ 1.Fixed ။
အတွေ့အကြုံအပေါ် 2.Improve ။
SMS အတွက် Messenger ကို
17.28 ကို MB
စာသားမအခမဲ့ & အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု & SMS ကို & MMS ကိုရေးအဖွဲ့
AI အကို Message - ...